သင့်ရဲ့လိုင်စင်ကို WINDOWS 10 သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါလိမ့်မယ် - WINDOWS ကို - 2019
"သင်၏လိုင်စင် Windows 10 ကိုသက်တမ်းကုန်ဆုံး" ဟုအဆိုပါသတင်းစကားကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
တခါတရံမှာ 10 windose အသုံးပြုမှုစဉ်အတွင်းရုတ်တရက်သတင်းစကားကိုစာသားနှင့်အတူထင်ရှားစေခြင်းငှါ "သင်၏လိုင်စင် Windows 10 ကိုသက်တမ်းကုန်သွားပြီ"။ ဒီနေ့ဤပြဿနာကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်နည်းလမ်းများအကြောင်းကိုပြောပြပါ။
ဗားရှင်းအတွင်းကို Preview ၏အသုံးပြုသူများအဘို့ဤသတင်းစကား၏အသွင်အပြင်ဟာ operating system ၏စမ်းသပ်မှုကာလများအတွက်ချဉ်းကပ်နောက်ဆုံးနေ့ဆိုလိုသည်။ ဆော့ဖ်ဝဲချို့ယွင်းမှုကြောင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့နိမိတ်လက္ခဏာကို - ထိုကဲ့သို့သောမက်ဆေ့ခ်ျကို၏ "များစွာ" ၏သမားရိုးကျဗားရှင်း၏အသုံးပြုသူများအတွက်။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုအတွက်အကြောင်းကြားစာနှင့်ထိုပြဿနာကိုဖယ်ရှားပစ်ရရန်မည်သို့ကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
Method ကို 1: စမ်းသပ်ကာလ (အတွင်းကို Preview) ကိုတိုးချဲ့နေ
၏အကူအညီဖြင့်ပြုသောအမှုနိုင်မှပြန်လည်စတင်ရုံးတင်စစ်ဆေးကာလ - ထိုအတွင်း၏ Windows 10 ကိုဗားရှင်းအဘို့သင့်လျော်သည်ဖြစ်သောထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှပထမဦးဆုံးအလမ်း, "Prompt ကိုဆင့်ဆို"။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဤသည်ဖြစ်ပျက်:
အဆိုပါဖွင့်ပါ "Prompt ကိုဆင့်ဆို" မဆိုအဆင်ပြေတဲ့နည်းလမ်းကိုဥပမာ - အဘို့, ကတဆင့်ရှာတွေ့ "ရှာရန်" ထိုသို့စီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ်အလုပ်လုပ်ပြီး။
သင်ခန်းစာကို: မှာ Windows 10 မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ် "Command Prompt ကို" စတင်ခြင်း
အောက်ပါ command ကိုရိုက်ပြီးနှိပ်က run « ENTER »:
ဒီ command အခြား 180 နေ့ရက်ကာလအဘို့လိုင်စင်အတွင်းကို Preview ၏တရားဝင်မှု၏ကာလတိုးချဲ့ပါလိမ့်မယ်။ ကသာ 1 အချိန်အလုပ်လုပ်တယ်သတိပြုပါ, တစ်စက္ကန့်အချိန်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ဒါကြောင့်ကိုအသုံးပြုပါ။ လုပ်ဆောင်ချက်၏ကျန်ရှိသောအချိန်အော်ပရေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ် Checkslmgr.vbs -dli.
ဒီ tool ပိတ်ပြီးပြောင်းလဲမှုများလျှောက်ထားရန်ကွန်ပျူတာကို restart ချလိုက်ပါ။
ဤနည်းလမ်းကို 10 windose လိုင်စင်ပြီးနောက် message ကိုဖယ်ရှားပစ်ပါလိမ့်မယ်။
ထို့အပြင်အတွင်းကို Preview ၏ဗားရှင်းအသုံးမပြုတော့တဲ့အခါ, အသိပေးချက်များကိုထင်ရှားစေခြင်းငှါထည့်သွင်းစဉ်းစား - ဤကိစ္စတွင်အတွက်ဖြေရှင်းချက်နောက်ဆုံးပေါ် updates များကို install လုပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
သင်ခန်းစာကို: နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းကို Windows 10 ကနေမွမ်းမံ
Method ကို 2: မိုက်ကရိုဆော့ဖများအတွက်နည်းပညာပိုင်းပံ့ပိုးကူညီမှုကိုဆက်သွယ်
ဤသတင်းစကားကိုအဆိုပါလိုင်စင်ရဗားရှင်းပေါ်လျှင်အစီအစဉ်ကိုကျရှုံးလိမ့်မယ်ဆိုလိုတာက, 10 windose ။ ဒါဟာလိုင်စင်ရုတ်သိမ်းအဘယျကွောငျ့ activation server ကို OS ကိုအဓိကမမှန်ကန်ကြောင်းစဉ်းစားခဲ့လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, Redmond ကော်ပိုရေးရှင်း၏နည်းပညာပံ့ပိုးမှုမှပြန်လည်ကုမပါဘဲမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။
ပထမဦးစွာသင့် product key ကိုသိရန်လိုအပ် - အောက်ကလမ်းညွှန်ထဲမှာတင်ပြသည့်နည်းလမ်းများထဲမှသုံးပါ။
Read more: အဘယ်သို့ငါက Windows 10 အတွက် activation code ကိုရှာရမလဲ
ထို့နောက်ဖွင့်လှစ် "ရှာရန်" နှင့်ထောက်ခံမှုရေးသားခြင်းကိုစတင်ပါ။ အဲဒါကို run - ရလဒ်အမည်တူနှင့်အတူ Microsoft က Store မှ application တစ်ခုဖြစ်သင့်တယ်။
သင်သည် Microsoft Store ကမသုံးထားဘူးဆိုရင်, သင် support ကိုဆက်သွယ်နှင့်သင့် browser ၏အကူအညီဖြင့်ဒီဟိုက်ပါလင့်ခ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်, အဲဒီနောက်ကို item ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ခြင်းနိုင်ပါတယ် "ဟုအဆိုပါ browser မှာဆက်သွယ်ပါပံ့ပိုးမှု"ဒါကြောင့်အစက်အပြောက်အောက်ပါပုံရိပ်မှာမှတ်သားနေသည်ဘယ်။
အဆိုပါ activation နေ့စွဲပြီးနောက်အသိပေးချက်များကို disable လုပ်ဖို့ Option တစ်ခုရှိပါသည်။ ၏သင်တန်း, ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မပါဘူး, ဒါပေမယ့်နှောင့်အယှက်မက်ဆေ့ခ်ျကိုပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီ algorithm ကိုလိုက်နာပါ:
command ကို input ကို tool ကိုများအတွက် Call (သင်မကြိုက်ဘူးလျှင်, ပထမဦးဆုံးနည်းလမ်းရည်ညွှန်း), ရေးရန်slmgr -rearmနှင့်စာနယ်ဇင်း ဝင်ရောက်.
သော့ကိုပေါင်းစပ်နှိပ်ဖြစ်လျှင်, command ကို input ကို interface ကိုပိတ်ပြီး ဦးဝင်း + R ကိုအဆိုပါ input ကိုလယ်ပြင်အစိတ်အပိုင်းနာမ၌မှတ်ပုံတင်မည် services.msc နှင့်စာနယ်ဇင်း "အိုကေ".
အဆိုပါ Windows 10 ကိုစာစောင်၏မန်နေဂျာ "ဝန်ဆောင်မှုကို Windows လိုင်စင် Manager ကို" နှင့်လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်ကို double-click လုပ်ပါ။
အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ဂုဏ်သတ္တိများ, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "မသန်စွမ်း"ပြီးတော့ "Apply" နှင့် "အိုကေ".
ထို့နောက်ဝန်ဆောင်မှုနေရာချထား "ဒီကို Windows Update ကို"ထိုအခါတွင်လည်းပေါ်မှာ double-click LMC နှင့်ခြေလှမ်း4ကနေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းလိုက်နာပါ။
အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲမှု tool ကိုပိတ်ပြီးကွန်ပျူတာကို restart ချလိုက်ပါ။
အဆိုပါဖော်ပြထားနည်းလမ်းအသိပေးစာကိုဖယ်ရှားလိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့, တဖနျ, ထိုပြဿနာများ၏အလွန်အကြောင်းမရှိပြေလည်သည်မဟုတ်, ထို့ကြောင့်ရုံးတင်စစ်ဆေးကာလတိုးချဲ့သို့မဟုတ် 10 windose လိုင်စင်ဝယ်ယူရန်ဂရုစိုက်ပါ။
ကျနော်တို့ "သင်၏လိုင်စင် Windows 10 ကိုသက်တမ်းကုန်သွားပြီ" နှင့်ထိုပြဿနာနှင့်သာအကြောင်းကြားစာနှစ်ဦးစလုံး၏ဖျက်သိမ်းရေး၏နည်းလမ်းများနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းတယ်သတင်းစကားများ၏အကြောင်းတရားများကိုလေ့လာခဲ့ကြသည်။ တက်ကဉျြးခြုပျ, ကျနော်တို့လိုင်စင်ဆော့ဖ်ဝဲကိုသင် developer များအနေဖြင့်ထောက်ခံမှုလက်ခံရရှိရန်ခွင့်ပြု, ဒါပေမယ့်လည်းခိုးကူးဆော့ဖ်ဝဲကိုထက်အများကြီးပိုလုံခြုံမသာကြောင်းမှတ်မိသေးတယ်။